Yekutanga Nzvimbo Yevatengesi Yekutengeserana Rusununguko
Chitatu 22 Chikumi 2022
Yekutanga Nzvimbo Yevatengesi Yekutengeserana Rusununguko Anosimudzira nzvimbo dhizaini ye1900m2 yaidikanwa, vashanyi vasati vatarisisa mabheji e145 epasi rose mukati meSalon de TE. Kubata fungidziro yevashanyi yehupenyu hwemhando yepamusoro uye kudanana "Deluxe Chitima Rwendo" yakagadziridzwa seyiyi pfungwa huru. Kuti vagadzire mutambo wegamuchidziro musangano wekushandurwa wakashandurwa kuva wezuva chiteshi chinyorwa chirauro yakaiswa nemukati meimba yemanheru chitima chechitima nechimiro chehukuru hwechitima chekutakura windows windows chinoburitsa nyaya dzinozivisa nyaya. Chekupedzisira, nzvimbo yakawanda-inoshanda nhandare ine nhanho inovhura kune akasiyana akaratidzirwa mazita ekuratidzira.
Chipiri 21 Chikumi 2022
Kukwezva Vashanyi Nhare Mukuda nemhepo inzvimbo yekugara yezana ramakumi maviri yakagadzwa mukati megumi maeka maekisesaizi pedyo nemusha weRavadinovo, nzvimbo iri pakati pegomo reStrandza. Shanyira uye unakidzwe nemakurukota ane mukurumbira wepasi rose, unoshamisa kuvaka uye inokurudzira nyaya dzemhuri. Relax pakati pekudyara magadheni, nakidzwa musango nemadziva kufamba kwemvura uye unzwe mweya wetsitsi.
Muvhuro 20 Chikumi 2022
Kukwezva Vashanyi Iyo Nqaba ipiro yakazvimiririra yakatanga makore makumi maviri apfuura muna1996 kubva pakurota kubva paudiki kuti uzvivake weCongwe, zvakafanana mune ngano. Mugadziri zvakare mugadziri, muvaki uye mugadziri wemamiriro epasi. Pfungwa huru yeprojeketi ndeyokugadzira nzvimbo yekutandara yemhuri, sekunge inofarira vashanyi.
Svondo 19 Chikumi 2022
Chigadzirwa Iyo inonyanya kukosha mukana wechigadzirwa ichi ndeyekudzidzira kwekudzidza uye ndangariro Kuvandudza. MuShine uye Tsvaga, Constellation yega yega inoitwa zvine simba, uye dambudziko iri rinodzokororwa. Inoita yakasimba chifananidzo mupfungwa. Kudzidza nenzira iyi, kuita uye kudzidza uye kudzokorora, hakuna kufinha uye kunoita kuti ive yakasimba Kurangarira uye kunakidza. Iyo inonzwa zvikuru, inofambidzana, yakapusa, yakachena, idiki uye yemazuva ano.
Mugovera 18 Chikumi 2022
Hotera Iyi hotera iri mukati memadziro eAna Tembere, pazasi peGomo Tai. Chinangwa chevagadziri chaive chekushandura dhizaini yehotera kuti ipe vashanyi pekugara vakanyarara uye vakagadzikana, uye panguva imwecheteyo, bvumidza vashanyi kuti vaone nhoroondo yakasarudzika uye tsika yeguta iri. Nekushandisa zvinhu zviri nyore, mataira akareruka, mwenje wakanyorova, uye nehunyanzvi hwakasarudzwa hunyanzvi, nzvimbo yacho inoratidza pfungwa dzese mbiri uye dzemazuva ano.
Fluid Cube and Snake Fenicha Yakachena Chitatu 29 Chikumi
Bubble Forest Paruzhinji Zvifananidzo Chipiri 28 Chikumi
The Cutting Edge Kugovera Pharmacy Muvhuro 27 Chikumi
Marabhoritari Emvura Yekuchenesa System Yekutanga Nzvimbo Yevatengesi Yekutengeserana Rusununguko Kukwezva Vashanyi Kukwezva Vashanyi Chigadzirwa Hotera